Animaker Inc: Iyo Yakanakisa Animation Software yeVanotanga - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Kana iwe uri kutsvaga kuti ugadzire akajeka maficha pane bhajeti, iwe unofanirwa kunyatso tarisa animaker! The Software iri nyore kushandisa uye inokwanisika, saka unogona kugadzira vhidhiyo yehunyanzvi pasina kutyora bhajeti yako kana kupedza nguva yako yese uri pamberi pekombuta. Kunyange mapros anoshandisa otomatiki Software kugadzira mavhidhiyo ane animated mazuva ano, uye iyi puratifomu inotora nhanho mberi nayo kushandisa michina uye gore-based chengetedzo. animaker ibasa idzva rinoita kuti kugadzirwa kwemavhidhiyo ane hupenyu zvive nyore uye zvinakidze. Nayo yegore-yakavakirwa papuratifomu, iwe unogona ikozvino kugadzira yakataridzika-kutaridzika kuchangamuka pasina kunetseka nezvekuisa Software kana kuhaya nyanzvi kuti ikuitire basa racho.
animaker chinhu chinokatyamadza chiri nyore, gore-yakavakirwa DIY animated vhidhiyo yekugadzira chishandiso kugadzira zvinoshamisa munhu, bhizimisi, uye mavhidhiyo ekushambadzira wega. Iyo inbuilt maficha uye mashandiro anoita Animaker chishandiso chakanakira kugadzirisa izvo zviri kukura zvekushambadzira vhidhiyo. Semakore-based video animation Software, animaker inoita kuti uchengetedze basa rako rese pane akachengeteka makore maseva.
Iyo Vhidhiyo yekugadzira app iri nyore kushandisa uye haidi chero ruzivo rwekutanga mukugadzira vhidhiyo. Learning kushandisa app imhepo.
Mavhidhiyo e-kudzidza uye kudzidziswa
animaker Inc. inosanganisa kugona uye tekinoroji yepamusoro kuti inyatso kuvhiringidza musika wekugadzira vhidhiyo nekugadzirisa nekubatsira vese vane hunyanzvi uye vasiri-nyanzvi vagadziri pasi rese kushandura mazano avo kuita mavhidhiyo ehupenyu. Pamusoro peayo mavhidhiyo ehupenyu, animaker inopa vashandisi mukana wekugadzirisa panguva imwe chete mifananidzo uye mhedzisiro pane imwe skrini uye zvinyorwa zvemafirimu pane imwe, uye kugadzirisa uye kurodha mavhidhiyo ehupenyu zvakananga kune avo evanhu vezvenhau Mapuratifomu. Yakatangwa muna 2014, animaker nhasi anoverenga vanopfuura mamiriyoni mana vatengi, kubva startups kumakambani eFortune 500.
"Kusvika pari zvino, ivo vakabatsira vashandisi kugadzira mamirioni evhidhiyo ehupenyu hwemhando dzese dzekushandisa, kubva pazvishuwo zvekuzvarwa zviri nyore kusvika kumavhidhiyo emhando yepamusoro, asi izvi zvangogadzirisa chidimbu chidiki chechinetso," akadaro RS Raghavan, CEO we animaker. "NeAnimaker 2.0, takatambanudza mapapiro edu kubatsira vagadziri kushanda pamavhidhiyo mhenyu uye mavhidhiyo ane animated. Ichi chishandiso chitsva chinopinda mumusika muhombe wekugadzira mavhidhiyo nekuwedzera midziyo yevhidhiyo iyo vashandisi vedu vanogona kushanda nayo kugadzira mavhidhiyo anonakidza uye ekugadzira epamoyo. ” "Animaker yakatibatsira kugadzira mavhidhiyo akavandudza zvakanyanya dzidzo yevarwere veNICU kubatsira kubatsira vacheche vachangozvarwa muNICU, "akadaro Leslie Altimier, Director weClinical Innovation & Research, Philips. HutanoTech, USA. animaker inopa huwandu hwezvigadzirwa zvekugadzira vhidhiyo kuCambridge, Massachusetts-based Philips Hutano kubatsira kuvandudza kutarisirwa kwevarwere kuburikidza zvirinani, zvinowedzera kuita zvemukati zvedzidzo zvakagadzirirwa varwere vayo. Animaker 2.0 yakazara nezvinhu zvitatu zvinonakidza zvigadzirwa.
Vhidhiyo inotsanangudza isumo ine simba kunguva nyowani yechiratidzo chako. Uye iwe unogona kuona kuita zvine mutsigo mumavhidhiyo kusvika pamaminetsi maviri kureba. Saka gadzira imwe muchirongwa chako chekutanga chekubudirira gore rino! Vhidhiyo inogona kuve yekurarama-chiito, yakazara animated, kana inogona kusanganisira kumwe kusanganiswa kwehupenyu-kuita uye kuchangamuka. Mimhanzi inotsanangura mavhidhiyo gonesa vashambadziri kuti vape kana iwo mazano akaomarara nenzira yakatsetseka uye yakapfava. Vhidhiyo ndiko kusangana kwakakwana kwevaraidzo uye kutaura nyaya kuti zvisike kutsanangura zvakanakira chigadzirwa kana sevhisi. Nedzidziso yakajeka, yakapusa asi inobata mifananidzo, uye yakasarudzika uye ine simba yekufonera-ku-kuita meseji, uchishandisa vhidhiyo yemifananidzo ndiyo nzira yakanakisa yekutaura nyaya uye kutendeuka kunyangwe nyaya dzinofinha kuva dzinonakidza. Video content inorerutsa chokwadi chakaoma uye inogadzira marefu ekushandisa manyoro, bhizimisi mazano, uye tekinoroji yepamberi maitiro anogayiwa zvakanyanya.
Izvi zvinorevei kwauri seB2B bhizimisi ndiwo maratidziro aunoita kambani yako zvine basa. Kupa zvakanangwa, zvakatariswa, uye zvinokwezva zvemukati zvevhidhiyo, semuenzaniso, zvinogona kuunza mibairo yakakosha. Kubva pakubata kutarisisa kwevanoita sarudzo kusvika kurerutsa maitiro akaoma uye kuendesa meseji yako zvinobudirira, hezvino 9 zvikonzero zvekubatanidza animated anotsanangura vhidhiyo mune yako yekushambadzira zano. Mavara anogona kuve akaomarara nekuti kune nzira dzakawanda vanhu vanogona kududzira zvavanoverenga. Vanhu vanowana kunzwisisa kuri nani kwechigadzirwa kana sevhisi kana vangoona nekunzwa mumwe munhu achitsanangura. Vhidhiyo inotsanangura inokubatsira kuti ubatane zvirinani nemutengi wako nekutsanangura zvauri bhizimisi vanogona kuvaitira uye nei vachifanira kukusarudza iwe pane mamwe mabhizinesi anokwikwidza. Wagadzirira kugadzira vhidhiyo yako yekutanga? Tinokuunzira Animaker.
Animaker ndeye freemium Software. Izvi zvinoreva kuti kunyangwe ichipa chirongwa chemahara icho vashandisi vanogona kutora mukana nacho, muchokwadi, iwe unozofanirwa kutenga kunyoreswa kuti ushandise ese maficha aanopa. Vashandisi vehurongwa hwemahara vanokwanisa kuwana ese maficha emupepeti, vanogona kugadzira mavhidhiyo anosvika 2 maminetsi kureba, uye kuwana mamwe matemplate uye midhiya zvinhu. Nekudaro, mavhidhiyo haakwanise kutorwa pasi, achave nemuchina weAnmaker paari, uye huwandu hwekunze kwenyika pamwedzi huchaganhurirwa. Vashandisi vakabhadharwa havawani nyaya idzi uyezve vanowana mamwe mabhenefiti. Iyo yemahara chirongwa inzira yakanaka yekuyedza naAnmaker, asi iwe pakupedzisira unozofanirwa kutenga kunyorera kuti uwane zvakazara mairi. Animaker inopihwa kuburikidza nezvirongwa zvina kutanga nePamoyo Chirongwa pa $ 12 pamwedzi. Chirongwa cheMahara chinopihwa zvakare. Zvirongwa nemitengo zvinoenderana nenhamba yezvinhu uye kurodha pasi mavhidhiyo. Mutengo weAnimaker wakakamurwa maererano nezvakapihwa. Kubhadhara kwemwedzi nemwedzi uye zvirongwa zvekubhadhara zveGore zvine zvakare musiyano wakakura mumutengo.
Business Ronga - $ 39 / pamwedzi / inobhadharwa pagore, $ 59 / pamwedzi / inobhadharwa pamwedzi.